Topnepalnews.com | किन आत्महत्या ??? -बावुलाल भण्डारी
किन आत्महत्या ??? -बावुलाल भण्डारी
Posted on: May 20, 2016 | views: 182
जीवन देखि अत्यन्त खिन्न र निरास बन्न पुगेको कुनै ब्यक्तिले एक दिन अमेरिकाका चर्चित उत्प्रेरक वक्ता र सकारात्मक चिन्तनका अभियन्ता फादर नर्मन भिन्सेन्ट पिललाई फोन गरेर आफूले आत्महत्या गर्न लागेको कुरा बतायो । पिलले उसलाई तत्काल आफ्नो अफिसमा डाके ।'
उसले एकै सासमा आफ्नो जीवन गहन अन्धकार र चरम उदासीमा गुज्रिरहेको र यस्तो अर्थहीन जिन्दगीलाई अगाडि बढाई रहन अव उ संग कुनै कारण र उत्साह बाँकी नरहेको बतायो । उसको कुरा ध्यानपूर्वक सुनेपछि पिलले उसलाई रातो र निलो २ वटा कागज दिंदै रातो कागजमा उसका सबै दूःख वा पिरहरु र निलो कागजमा खुसी वा सुखका पक्षहरुको सुची बनाउन लगाए ।
जीवन देखि पूर्णत हरेस खाइसकेको उसले आफ्नो जीवन भरमा खुसी वा आनन्दको एउटै पल पनि नभएकोले खुसी टिपोट गर्ने निलो कागज आवश्यकै नपर्ने बताउंंंंंंदै गर्दा पिलले सोधिहाले– तिम्रो श्रीमतिले छाडेर गएको कति वर्ष भयो ?
अलिकन उत्तेजित हुँदै उसले भन्यो–हैन, के नचाहिने कुरा गरेको ? मेरो श्रीमति म सङ्गै छन् र मलाई अत्यन्त माया गर्छिन् । अव पिलले मौका समाइहाले –स्यावास ! कति खुसीको कुरा यो कि तिम्रो श्रीमतिले तिमीलाई औधी माया गर्छिन् । लौ, टिपिहाल यसलाई खुसी जनाउने निलो कागजमा नंंंंं.१ मा । उनले यसैसाथ दोश्रो प्रश्न गरे –अव भन, तिम्रो छोरा कुन जेलमा छ अहिले ? तत्काल जवाफ आइहाल्यो –कस्तो वाहियात र उटपट्याङ्ग प्रश्न तपाइका ?
कहाँ जेलमा हुनु मेरो छोरा ! विहान कलेज पढ्छ , दिउँसो अनुभवका लागि कपडा दोकानमा काम गर्छ । अत्यन्त सज्जन छ । पिल पनि के कम , थपिहाले– यो पनि कम्ता खुसीको कुरा हो ? छोरा सज्जन छ र पढाइ र काम एकै साथ गर्दैछ ! टिप यसलाई खुसी तिरको नंंं.२ मा । अंंंं, अनि तिम्रो घर खेत कतिमा लिलाम भएको हो ? लिलाम सिलाम केही भएको छैन । मेरो अहिले धेरथोर जग्गा जमीन र घर छ । सानोतिनो ब्यापार पनि गर्दैछु । –त्यसो भए तिम्रो छोरीको दुर्घटनाका कारणले खुट्टा काट्नु परेको कहिले ?
– परिवारमा अहिले सम्म दूघर्टना र अङ्गभङ्ग भएको कोही छैन । ..............यस्तै सवाल– जवाफ हुँदै गए र खुसीको सूची लामो बन्दै गयो । उसको अगाडि आफूले सोंंंंंच्दै नसोचेको जीवनको उज्यालो पाटो अव छर्लङ्ग हुँदै गयो र अनुहार प्रसन्नताले उजेलिन थाल्यो । अन्तमा उसले आफै भन्यो – म आफुलाई बेहद दुखी ठाँन्दथें तर म बास्तवमा ज्यादै सुखी मान्छे पो रहेंछु । मलाई त्यसरी जिन्दगी चिनाइ दिने तपाइलाई लाख लाख धन्यवाद ।
खुसी कुनै निरपेक्ष बस्तु होइन, मनको एउटा अवस्था हो जसलाई हामी आफैले बनाउँछौंंं । त्यसैले प्रचुर साधन सम्पन्न भइकन पनि अत्यन्त दुःखी बनेका मान्छे र न्यूनतम वस्तुबाट पनि अत्यन्त खुसी र प्रसन्नताको जीवन जिउने मान्छेको संसारमा कुनै कमी छैन । छनौट आफ्नो –आफ्नो !!